Iirobhothi zokunyathela ziqhuba inguqu yemodeli yemveliso kwishishini lesitampu sesinyithi
Ixesha lokuposa: 09-17-2021
Kwiminyaka yakutshanje, imeko yezoqoqosho iye yatshintsha. Ngokuvela kweentlobo ezahlukeneyo zezixhobo ezizenzekelayo, umjikelo wayo we-R&D uyakhawuleza, ixabiso likhulu, kwaye lijolise kakhulu kwaye linamandla. Ukusebenza ngokukhawuleza kwabamba amehlo abantu belizwe. Oku kuquka i...Funda ngokugqithisileyo »
Uhlalutyo lwe-CAE Springback kunye neMilinganiselo yoMzinzi weNdawo zokuFakwa kweZitampu zeMoto
Thina,inkampani yeLangO Tool & Die yenye yabenzi bobuchule bokwenza isitampu eTshayina ikakhulu kukufa kweemoto. Metal stamping iindawo rebound yingxaki enzima ukuba iindawo isitampu zeemoto, ingakumbi izinto zentsimbi ephezulu amandla ngamandla isivuno ngaphezu 600Mpa. Okwangoku, kukho...Funda ngokugqithisileyo »
CNC isixhobo soomatshini isixhobo
Ixesha lokuposa: 09-03-2021
Ukuthunyelwa kwesixhobo esitsha e-USA! Isixhobo sesixhobo sokunyathela isitampu i-automotive iqhubela phambili udluliselo i-tanden yokwenziwa kwe-additivemanfacturing cbc eauipment oomatshini iimoto ezizenzekelayoFunda ngokugqithisileyo »
Ukunyathela ngemoto kuyafa
Ixesha lokuposa: 08-27-2021
Ukufa kwesitampu semoto kuthunyelwa eMexico. Iseti yesibini kunye neseti yesithathu nazo ziqalisile ukupakishwa kwaye zithunyelwe zilinde umthumeli wempahla ngomso. Ezi seti zimbini nazo zizixhobo zerobhothi. Ubungakanani besixhobo yi-3600 * 920; 3500*780.Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 08-25-2021
Ukunyathela ngemoto kuyafa! Isixhobo sithunyelwa eMexico. Ukuthunyelwa kweeseti ze-3 zezixhobo le iseti yokuqala. Isixhobo sihanjiswa yi-manipulator, kwaye umfanekiso oqhotyoshelweyo yingxelo yokulinganisa inkqubo yesixhobo. Sithelekise izinga lokupasa kwemveliso ngexesha lolingo lokuqala lokungunda kunye ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 08-11-2021
Senza iindawo ezisesichengeni zezixhobo zehardware zabathengi ePoland. Sithenga izinto eziphathekayo, inkqubo yokucoca i-CNC, inkqubo yokushisa ukushisa, inkqubo yokugaya, inkqubo yokusika ucingo, inkqubo yokugqiba i-CNC, kwaye uqhube uhlolo olupheleleyo lwenxalenye nganye ngaphambi kokuthunyelwa. Enkosi...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 07-29-2021
Sivelise izixhobo ezahlukeneyo zesakhelo kubathengi baseJapan amaxesha amaninzi. Siyila, siqhube, sihlanganise kwaye silungise izixhobo zesakhelo. Siqokelele ubutyebi bamava, sinenkqubo yemveliso epheleleyo, kwaye samkelwa kakhulu ngabathengi. . Enkosi ngengqalelo kunye nenyaniso...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 07-07-2021
Silungiselela kwaye sithumele iindawo ezisecaleni zezixhobo ezenziwe ngu-MAGNA. Sivavanye indawo yomngxuma ngamnye womsebenzi ngamnye.Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 07-01-2021
Thumela eMexico. Imveliso yemveliso yesi sixhobo i-aluminium kunye nobukhulu be-1.0mm. Ubume bemveliso buyinkimbinkimbi, kwaye iimfuno zokunyamezela ubungakanani zingaphezulu. Ngenxa yomngxuma omkhulu kumbindi wemveliso, ububanzi bekhonkco eliphambili lemveliso limxinwa, imveliso iphinda iphinde yenzeke...Funda ngokugqithisileyo »
Isixhobo semoto esineziqhoboshi zeenyawo
Ixesha lokuposa: 06-22-2021
Senze izixhobo ezininzi zokunyathela ngeenyawo zemoto eJamani, eMexico naseSpain. Sishwankathele ubutyebi bamava obugcisa kwimigca yesixhobo kunye nolwakhiwo lwesixhobo kunye nokulungiswa kweempazamo kwesi sixhobo semveliso. Ukususela kwiseti yokuqala yeesampuli, ixesha ziiveki ezili-12. Incitshisiwe yaya kwiiveki ezi-8 ukuya kwezi-10 ngoku, kwaye ...Funda ngokugqithisileyo »
Automobile isixhobo eqhubekayo
Ixesha lokuposa: 06-17-2021
Lixesha lokuqala ukwenza isixhobo kumthengi waseJamani, kwaye iye yamkelwa ngumthengi. Umthengi wanelisekile ngumgangatho wethu kunye nomoya wokusebenzisana. Sisebenzise iiveki ezi-2 ukuyila ukungunda, iiveki ezi-3 zokusetyenzwa, ezi-4 ukudibanisa kunye nokulungiswa kweempazamo, kunye neveki e-1 ukugqiba. Enkosi ngethemba lakho...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: 06-11-2021
Isixhobo esiqhubekayo semoto, Isixhobo se-GESTAMP sathunyelwa ngaphandle eSpain, ubukhulu bezinto ezibonakalayo babuyi-3.0mm, into leyo yayiyi-JSH599R. Isixhobo senza izikhululo ze-16, ubungakanani besixhobo sasiyi-3350mm * 750mm, i-punch tonnage yayingu-1000T, kunye nobunzima be-mold yi-4.3T. Isixhobo sokuqala sanamhlanje sizame, ukuhlolwa kobungakanani 8...Funda ngokugqithisileyo »